Shiinaha Heat yaraynta warshad mashiinka iyo alaab-qeybiyeyaasha. Boya
Mashiinka yaraynta kuleylka
Bacda Bacda Vacuum iyo Rolls
mashiinka maqaarka faakiyuumka
Maaddaama mid ka mid ah soo saarista hoggaamineed ee xirmada jilicsan ee Shiinaha, Boya kaliya kuma siineyso qalabka wax lagu duubo laakiin sidoo kale mashiinka wax lagu duubo. , Mashiinka baakadaha (buufin), mashiinka baakooyinka faakiyuumka maqaarka, mashiinka baakadaha aan biyuhu lahayn, mashiinka kuleylka kuleylka, Nooca sanduuqa baakadaha qaboojiyaha.
Mashiinka yareya kuleylka Boya wuxuu ka sameysan yahay qalab bir leh oo adkeysi leh .Waxaa afar afarta taayir ee salka hoose ee mashiinku ay si haboon ugu dhaqaaqi karaan iyadoo aan loo eegin meesha aad uga baahato .Waa faa'iido u fududahay in la isticmaalo .Waxay ku habboon tahay warshad yar ama makhaayad.
Mashiinka kuleylka kuleylka ayaa la jaan qaadaya filimka yareynta sida PVDC filimka yareynta, EVOH filimka yareynta ama filimka yareynta EVA.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa baakadaha waxsoosaarka hilibka sida hilibka doofaarka, hilibka lo'da, wanka, digaaga, hilibka qabow ……
Sidee u shaqaysaa?
Ka dib markaad kululeyso filimka soo yaraanaya ayaa la yareyn doonaa oo lagu duubi doonaa sheyga aad si adag u xirxirtay. Baakadaha noocan ah waxay si buuxda u soo bandhigi karaan muuqaalka maqaalkaaga, waxay hagaajinayaan waxqabadka suuqgeynta wax soo saarka waxayna ku kordhinayaan qiimaha alaabtaada.
●Mugga wax ku oolka ah: 160L
●Hufnaanta shaqada: 6-8times / daqiiqo
●Awood: 380V / 50HZ 12KW
●Baaxadda haanta biyaha: 650mmx460mmx500mm
1. Iyada oo la shaqeynayo xusuusta ogaanshaha sare iyo hoose, si weyn u wanaajinaysa wax soo saarka wax soo saarka。
2. Qaybta hoose waxaa loo isticmaalaa gaadiidka hawada, mugga hawadana waxaa lagu hagaajin karaa qalabka isweydaarsiga.
3. Gaadhsiinta waxaa gacanta ku haya badalka soo noqnoqda, xawaarahana waa la hagaajin karaa。
4. Godka sare waxaa loo furi karaa si fudud nadiifinta iyo dayactirka.
5. Nidaamka baakadka oo dhan waxaa laga arki karaa daaqadda hore.
Iyadoo 20 sano injineer khibrad leh, Boya waxay bixisaa xalka ugu kharash-ool badan labada qalab iyo qalab loogu talagalay macaamiisheena iyadoo lagu saleynayo codsigooda iyo shuruudahooda. Si loo hubiyo inay tahay kalsoonida, dib-u-soo-saarista iyo ku-habboonaanta hawlgal ee macaamiil kasta.
Dhanka Boya waxaan ku leenahay koox dad ah oo adag, saxna ah waaxdeena QC, marka amar kasta oo la bilaabo soo saarida 200 kiish ee ugu horeeya ayaa lagu tuuraa qashinka maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo mashiinka, waayo boorsooyinkan shaabadaynta ayaa ah tan ugu muhiimsan ee ay hubiyaan. Kadib 1000bags kale oo ay si joogto ah u tijaabin doonaan muuqaalka iyo shaqada si loo hubiyo inay si fiican u socoto .Kadibna kuwa kale ee u haray inay soo saaraan QC waxay hubin doonaan waqtigooda .Marka amarka la dhammeeyo waxay keydka u dhigayaan dufcad kasta markii macaamiisheena ay alaabta helaan haddii ay jiraan. su'aalaha nalooga jawaabo waxaynu si cad ula socon karnaa si aan dhibaatada u helno oo aan u helno xal aan ku hubinno in aysan mar dambe dib u dhicin.
Waxaan haynaa adeeg latalin perfect
Adeeg iibinta kahor, La-tashiga Codsiga, La-tashiga Farsamada, La-tashiga Xidhmada, La-talinta Shixnad, Adeegga iibka kadib.
Waxaan bilownay soo saarida bacda wax lagu buuxiyo iyo duubista tan iyo 2002, in ka badan 20 sano oo waayo aragnimo ah si aan kuu siino alaab dhaqaale iyo tayo sare leh.
Boorsada Vacuum waa badeecad kale oo iib ah oo kulul oo leh awood sanadle ah oo ah 5000ton.
Marka laga reebo badeecadahan caadiga ah ee caadiga ah Boya sidoo kale waxay ku siinayaan agabyo kala duwan oo xirmo jilicsan ah sida sameynta iyo sameysma flim, filim daboolida, bacda soo yaraata iyo filimada, VFFS, HFFS.
Badeecada ugu cusub ee filim maqaarka horeyba u tijaabisay si guul leh oo ku saabsan wax soo saarka ballaaran bisha Maarso 2021, Baaritaankaaga waa la soo dhaweynayaa!
Xiga: mashiinka kuleylka
Mashiinka Xirmooyinka Faakiyuumatikada
Mashiinka Xirmooyinka Vacuum-ka
Mashiinka Baakadaha Ganacsiga
Mashiinka Kumbuyuutarka Mashiinka Kumbiyuutarka Cuntada
mashiinka qolka faakiyuumka